Unobhala we-Ofisi yoMphathiswa Wezobuchwephesha boLuntu e-India
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Unobhala we-Ofisi yoMphathiswa Wezobuchwephesha boLuntu e-India
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Inobhala wase-India yoMphathiswa Wezokundiza
U-Shri Rajiv Bansal IAS (NL: 88) uthathe uxanduva luka-Nobhala, Icandelo loMphathiswa Wezokundwendwela Kwaseburhulumenteni kuRhulumente wase-India, u-Vice Shri Pradeep Singh Kharola, IAS (KN: 85) ngenxa yokuthatha kwakhe i-Superannuation ngo-Septemba 30, 2021.
UShri Bansal liGosa leeNkonzo zoLawulo laseIndiya leqela lika-1988, elivela eNagaland cadre.
Ubambe izikhundla ezininzi ezibalulekileyo kuRhulumente woManyano kubandakanya uSihlalo kunye noMlawuli oPhetheyo weAir India Ltd. kwi-Ofisi yoLuntu yezoPhapho.
Uye wabamba izikhundla eziphambili kuRhulumente waseNagaland.
Ubambe izikhundla ezininzi ezibalulekileyo kuRhulumente woManyano kubandakanya Usihlalo noMlawuli oPhetheyo, Inkampani Air India Ltd., Icandelo loMphathiswa Wezobuchwephesha boLuntu; Unobhala owongezelelweyo, M / o Petroleum & Gas Natural; USosiba odibeneyo, M / o Elektroniki kunye neTekhnoloji yoLwazi; Unobhala, weKhomishini yoLawulo loMbane (CERC); Nobhala odibeneyo, D / o Icandelo elinzima, M / o Amashishini aMandla kunye namaShishini kaRhulumente.
Uye wabamba izikhundla eziphambili kuRhulumente waseNagaland kubandakanya uMkomishinala kunye noNobhala, iD / o yezeMpilo kunye neNtlalontle yoSapho, eNagaland; UMkomishinala kunye noNobhala, iSebe leMfundo leSikolo, eNagaland; Umkomishinala kunye noNobhala, iSebe lezeziMali, eNagaland, njl.
Ifumaneka eRajiv Gandhi Bhavan kwisikhululo seenqwelomoya iSafdarjung eNew Delhi, iCandelo loMphathiswa Wezokundwendwela Kwaseburhulumenteni linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yesizwe kunye neenkqubo zophuhliso kunye nokulawulwa kwecandelo lezoPhapho. Linoxanduva lokulawulwa komthetho weenqwelomoya, 1934, imigaqo yemihlaba, 1937 kunye neminye imithetho eyahlukeneyo ephathelene necandelo leenqwelo moya elizweni. Eli candelo loMphathiswa lilawula ulawulo kwimibutho eqhotyoshelweyo nezizimeleyo efana neCandelo loMlawuli oMkhulu woPhapho lweeNdawo zoLuntu, iBhunga lezoKhuseleko lwezoKhuselo loLuntu kunye ne-Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy kunye neeNdawo eziManyeneyo zoLuntu ezifana neNkampani yezoLimo yeLizwe yaseIndiya, iGunya leeNqwelo moya eIndiya kunye nePawan Hans Helicopters Akuncinci. IKhomishini yoKhuseleko loLoliwe, ejongene nokhuseleko kuhambo lukaloliwe nakwimisebenzi ngokwemiqathango yezibonelelo zoMthetho wezoLoliwe, ka-1989 nayo iphantsi kolawulo lwalo Mphathiswa.
ICandelo loMlawuli wezoPhapho lwaBantu (i-DGCA) liqumrhu elilawulayo kwicandelo lezoPhapho lwaBantu, ikakhulu elijongana nemicimbi yezokhuseleko. Inoxanduva lokumisela iinkonzo zothutho lomoya ukuya / ukusuka / ngaphakathi e-India kunye nokunyanzeliswa kwemigaqo yomoya wasekuhlaleni, ukhuseleko lomoya, kunye nemigangatho yomoya. I-DGCA ikwalungelelanisa yonke imisebenzi yolawulo kunye noMbutho weHlabathi wezoPhapho lwaBantu (i-ICAO).